Shiinaha Mashiinka Samaynta Xawaaraha Sare / Soosaarayaasha & Alaabada | GZSJ
Mashiinka Sameynta Xawaaraha Sare / Corrugator
Qaabka Model GS ee Xawaaraha Sare ee Waxsoosaarka Waxsoosaarka Waxsoosaarka (Gear Drive) wuxuu qaatay nidaamka xakamaynta PLC, oo ah shaqooyin dhammaystiran oo hawlgal fudud, leh shaqooyin isku xira. Marka korontada la gooyo ay dhacdo habka wax soo saarka, waxay si wax ku ool ah u ilaalin kartaa amniga qalabka iyo caaryada. Waxay isticmaashaa waddo xiran oo dhan si loogu wareejiyo caaryada, hawlgalka xasilloon iyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka sare ayaa dammaanad qaadaya wax soo saarka ugu dhakhsaha badan, xawaaraha wuxuu gaari karaa mitir 25 daqiiqaddii. Sidoo kale khadka noocan ah ee wax soo saar wuxuu ku qalabeyn karaa hal caaryo oo leh laba qol, waxay badbaadin kartaa qiimo aad u qiimo badan macaamiisha.
Qaabka Model GS ee Xawaaraha Sare ee Waxsoosaarka Waxsoosaarka Waxsoosaarka (Gear Drive) wuxuu qaatay nidaamka xakamaynta PLC, oo ah shaqooyin dhammaystiran oo hawlgal fudud, leh shaqooyin isku xira. Marka korontada la gooyo ay dhacdo habka wax soo saarka, waxay si wax ku ool ah u ilaalin kartaa amniga qalabka iyo caaryada. Waxay isticmaashaa waddo xiran oo dhan si loogu wareejiyo caaryada, hawlgalka xasilloon iyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka sare ayaa dammaanad qaadaya wax soo saarka ugu dhakhsaha badan, xawaaraha wuxuu gaari karaa mitir 25 daqiiqaddii. Sidoo kale khadka noocan ah ee wax soo saar wuxuu ku qalabeyn karaa hal caaryo oo leh laba qol, waxay badbaadin kartaa qiimo aad u qiimo badan macaamiisha
Qalabka ceyriinka: PP / PE / PA / PVC / EVA
Naqshadeynta Naqshadeynta: Hal Ku xir
Danab: 380V --- 440V ama Customized
Qodobbada Iibinta Furaha: Waxsoosaar Sare
Isticmaal: Isticmaal Ballaaran
Nooca: Mashiinka Samaynta Mashiinka Dhuxusha
Soo rogaalka: Inverter ABB
Midab: caddaan, madow, buluug ama mid la habeeyay
Soo saar ： 40-60 Kg / H
Wareeji L / D: 30: 1
Magaca Summada: GZSJ
Awooda: 25KW - 50 KW
Dammaanad: Hal sano, 12 bilood
Iibinta ka dib Adeegga: Qaybaha Dayactirka Bilaashka ah, Taageerada farsamada Video
Nooca Wax-qabadka: Mashiinka Kordhinta
Astaamaha iyo faa'iidooyinka Xawaaraha Sare PP PE PA PVC Qalabka Mashiinka Mashiinka Qalabka Qalabka
1. Qaab dhismeedka gaarka ah ee furida iyo dhimashada iyo ku habboonaanta beddelidda caaryada ayaa xalliya dhibaatada si fudud u-duugga ah ee fur iyo baarka, iyo sidoo kale dhibaatada ku jirta sameynta cusbi caag ah.
2. Corrugator wuxuu qaataa qaab dhismeedka qaboojinta biyaha xiran, silsiladda xirmooyinka sameysmaya, iyo naqshad gaar ah ee tareenka, kaas oo ka dhigi doona dhammaan baloogyada inay si sax ah isugu ekaadaan, una socdaan si deggan. Xitaa ma aadan arki karin qadka isku xira dusha sare ee dhuumaha. Biyaha qaboojintu waxay ku dhex socdaan baaskiil, waxay ka dhigi doontaa xawaaraha qaboojinta si dhakhso ah, sidaas darteed xawaaraha wax soo saarka ee tuubada ayaa kor loo qaadi doonaa.
Dhanka kale, roogaha wuxuu qaataa naqshadaha dhismaha, waxaan isticmaali karnaa isla qaab dhismeedka laakiin dhererka sameynta kaladuwan ee kala duwan. Dhererka sameynta dhererka jiingadda, ayaa sii kordheysa soo saaridda tuubbada. Waxaan sameyn karnaa kala duubni dherer sameynta oo kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha cusbatayaasha kala duwan.
Faa'iidooyinka Xawaaraha Sare ee PP PE PA Mashiinka Waxsoosaarka Mashiinka Mashiinka Qalabka
1. Adoo adeegsanaya dhow xirmooyinka wasakhda ah! Marka mashiinada sameysanka ah si dhaqso leh ayey ku socon karaan, waxay gaarayaan 15-25M / MIN. ku qalabeysan yahay qalab wax lagu duubo oo keliya; Mashiinka weyn ee PVC wuxuu korsadaa iskudhafka lafdhabarka ah.
2.Adopts Mashiinka sameynta Xawaaraha Sare ee xawaaraha sare: qaabdhismeedka xiran, iskuxirka moduleka ee saldhigga guud ee xiritaanka wuxuu sameeyaa safar-wareeg ah oo ku socda marinnada socda.
3. Samaynta modules: waxay ka samaysan tahay bir adag, iyadoo si adag loo adeegsanayo qalabka wax lagu dhammeeyo ee CNC ee la soo saaray si loo hubiyo adkaanta iyo saxnaanta qaababka wax qaabeynta. Qaybtani waa fududahay oo ku habboon in la beddelo
4. Coiler: Meel keli ah ama labalaab oo leh mashiinka xaddidan.
5. Qaybaha korantada: Inverter ABB, xiriiriye Schneider, ilaaliyayaasha heerkulka Omron iwm.
Khadkan wax soo saarku wuxuu ku habboon yahay soosaarka noocan ah: tuubada fiilada siligga otomaatiga ah, marinka siligga korantada, tuubada qubidda ee mashiinka dharka lagu dhaqo, tuubada xaaladda ku xiran, tuubada telescopic, tuubada neefsashada ee caafimaadka iyo noocyada kale ee wax soo saarka tubular iwm.
Xawaaraha soosaarka (m / min)
Wadarta Awooda (KW)
1: Duubista filimka caaga ah marka hore
2: xirxirida sanduuqa alwaaxa
DEKADDA: DEKADA NINGBO
Shuruudaha Bixinta: 30% deebaaji ah T / T ka hor,, 70% dheelitirka la bixiyay maraakiibta hore.
J: Guud ahaan waa 20-45 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga Waqtiga gaarka ah ee looga baahan yahay ka doodista taariikhda keenista cusub.
S: Sideed ugu sheegtaa oraahda macaamiisha?
J: Fadlan bixi macluumaadka soo socda, si aan kuu siin karno qiimo iyo talo ahaan annaga oo ah soo-saare:
1. Nooca tuubooyinka aad rabto inaad soo saarto.
2. Dhexroorka tuubooyinka.
3. Qalab ceyriin iyo noocyadiisa
Haddii aad noo soo diri karto sawirrada shay-baarkaaga, aad ayaa loo qiimeyn lahaa.
J: Bixinta <= 1000USD, 100% ka hor. Bixinta> = 1000USD, 30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor shixnad. Haddii aad qabto su'aal kale, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Hore: Single Furo Extruder
Xiga: Mashiinka Sameynta Xawaaraha Dhexe
Mashiinka Sameynta Xawaaraha Dhexe
Single Furo Extruder